DAAWO MD. Farmaajo oo ka hadlay Muhiimada Shirkii Dh/mareeb iyo FIQI oo Dhaliilay War-murtiyeedka [Akhriso] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Sep 17, 2019 - 32 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Shirkii beelaha wada degga Gal-mudug, ee ka Qabsoomay magaalada Dhuusamareeb ayaa laga soo saaray War-murtiyeed, ay ugu muhiimsanayd in la wada dhiso Maamul loo wada dhanyahay sidoo kale in dib u eegis lagu sameeyo hanaankii lagu soo dhisay maamulka Galmudug.
Ergada shirka dib-u-heshiisiinta waxay isku raaceen in dawlada dhexe ay dhamaystirto waxyaabaha ka dhiman nabadaynta iyo dhamaystirka Maamulka Galmudug, Beesha caalamka iyo dawlada ayaa laga codsaday in sida ugu dhaw ay uga hawlgalaan taageerida Galmudug iyo dib u dhisida kaabyaasha Dhaqaale ee deegaanadaas
Waxaa la sheegay in dowlada federaalka Soomaaliya ay soo saareyso habraac iyo shuruudo ku aadan xulista Xildhibaanada Galmudug iyo Doorashooyinka Gudoonka iyo Madaxweynaha, waxaana wax laga baran doonaa hanaankii lagu dhisay maamulka Galmudug sanadkii 2015-kii, si loo saxo waxyaabihii khaldamay.
Madaxwaynaha DF Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka halday shirkii Xalay ayaa sheegay inaysan shacabka Galmudug kala maarmin oo dantu ay ku jirto inay Gacmaha is Qabsadaan.
“Dib u heshiisiintu waa ummaddu ha wada Noolaato, Magaalooyinka Galmudug ma kala Maarmaan, waa la isku wada Baahan yahay, waa inaan is ogolaano, waxa Mustaqbalkeenu ku Jiro, Dib u heshiisiintu waa wax bilowda Balse aan dhamaad lahayn, Bini’aadam ayaa la yahay oo khilaaf wuu imaan,” Ayuu yidhi Madaxwayne Farmaajo.
HALKAN KA DAAWO MUUQAAL IYO MADAXWAYNE FARMAAJO
Dhinaca kale Xildhibaan Axmed Macalim FIQI oo kamid ah Xubnaha Mucaaridka ku ah Xukuumadda Talada haysa, ayaa dhaliilay War-murtiyeedka soo baxay.
“Warmuriyeedka ka soo baxay Shirka Dibuheshiisiinta Galmudug ee xalay kaamarada madaxtooyada Villa Somalia kaligeed lagu soo duubay, nuxurka qodobadiisa marka la eego waa ka hooseeyaa himaladii dadka Galmudug.
Warmurtiyeedkani ma noqon karo mid shirkaas dadkii ka qeybgalay ay wax soo qoreen waa mid ka soo baxay guddigii xafiisyada Farmaajo iyo Khayre ka socday ee dibuheshiisiinta GM loo soo magacaabay, warmuriyeedkaan waxaa si guud loogu dafiray In Galmudug aheyd maamul jira, gaar ahaan qodobkiisa u danbeeya oo lagu sheegay “ In si degdeg ah dawladda Federaalka ah u soo dhisto GUDDIGA FARSAMADA MAAMUL DHISIDDA DAWLAD GOBOLEEDKA GALMUDUG” oo ka dhigan maamul hadda la aasaasaayo.
Odoyaasha dhaqanka oo wax laga bedelayo, habraacyo iyo shuruudo adag oo dawladda federaalka samayntooda laga sugayo, qaladaad la sheegay in la saxayo dhammaan qodobadaas waxey dhaawacayaan nidaamka daahfurnaanta iyo doorasho xor ah in ay ka dhacdo DG Galmudug.” Ayuu yidhi Fiqi oo ka hadlay.
C/qaasim salad xasan madaxweynihii carta lagu doortey,wuxu yidhi hadal dhaxalgal ah
Farmaajo iyo kheyre ma diidana.
Anigana IMA diidaneyn,ee waxay diidan yihiin dawladnimada iyo ka danbeynta.
Waxa iga talo ah mucaaradkoow farmaajo iyo kheyre waa laba
shaqsi weyna tegayaaan,ee dadkiina iyo dalkiina u tudha.
Hadaad nabada diidaan min waliba tuuladiisi buu tegayaa.
Muqdisho maaha magaalo LA wada leeyahay,
Reer mataan iyo cadcad baa looga tegayaa.
Ninkii itoobiya ka yimi wuu Ku laaban,kismaayo jareer iyo baajuun baa iska leh,nin dooni Ku yimi,iyo mid kuukuyo keentay,wey tegayaan qandala iyo birqod ayaad leedihiin.
Nabadgelyo Ku jooga,hadaad joogeysaan.
Shacabka masaakiinta ahna haku tumanina.
Wadanka halaga qabto hawiye iyo daarood.
Ma waxaad leedahay. Dabshid iyo garqaad xitaa Muqdisho. Waa laga qixinayaa.
Cadcad iyo mantaan cabdulle ayaa ku haraayo.
Waan ogahay dabshid ayaad u socotaa
Waa haraadigii 1991 boondheere Ku hadhey.
Islaantiisa hiraab ah,oo tidhi seedigiin
Martidu hadey edaab yeelan weydo,Dee baskii keenay bay raacayaan.goofku waa goof mataan cabdule galmaax.
Garqaad baska hayga buuxinina,ee boos ii qabta,wacade qof hadhayaa ma jiree.
Daw walaala ah oo la heshiisiiyo waa talaabo diin ahaan iyo dadnimo ahaanba lagu farxo.
Laakiin shirkan Villa Wardhiiglay uma qaban dad heshiisiin, waxay rabtay maamulkii hore rido oo mid iyaga u sacab tuma ay samaystaan, dibna 2021 u soo doorata ama wakhtiga u kordhisa.
Villa Wardhiiglay iyadaa maanta is kashiftay. Bal akhri qodobka afraad ee go, aanada meesha ka soo baxay oo sidan u qoran;
“in dowlada federalka agaasinto dhistana dowlad goboleed loo dhan yahay oo ay Galmudug yeelato.
@Garqaad awoow farta yar yar baa lagugu siray.kkk
Abdiqaasim”: NINKII UGU AQLIGA BADANAA
Raga maanta jooga.( Waxaan qirayaa in ninkaanu wax garad yahay run buu sheegay.
Sax weeye Dr Abdiqaasin (The statement from the former president is correct?
War xamartu taa taqaanay maaha. Miyaadan maqal reerkii salebaan ahaa. In uu Wada guursaday gabdhihii xamarweyne ee cadcadka ahaa. Maanta xamar waa magaalo habar gidir. Hhhhhhh. Yaan cadaado kaa maqal xamar waa goof mantaan.
Xamar waa goof somaali. Ama waa goof hiraab.
Awoowe bal fasiraadna iigu dar mar mar waxaan noqdaa damiin.
Waa maxaay hoos gelisku. Sidee habar jeclo miyaad in aan gadaal kasoo gocdo.
Aawey cadcadka hantidoodii?
Gabdhaha xornimo Laguma guursan?
Waar Dee anigu waan LA socdaa shaxda.
Cadaado haduu imaqlo,wax jira baan sheegay.
Hadeynaan runta isu sheegin ma bahabahaa
Baynu Ku wada noolaan.aawey sarihiii xamarweyne we dhaadheeraa kkkk cadaado weydiii?
Dee markaad maqasho dibuheshiisiin soomaali dhexdeeda ah,baad iska higootaaa.
Ina adeer naga daa sheeko daroodka waa ku sidee sow adigii gobta ahaa.
Yaa ku dhahay xoog ayaa gabar somaliyeed lagu guursadaa. Waa been waxaa sameeyay dad rabo in ay dadka isku diraan.
Miyaad aragtay cadcad iyo hiraab kala dacwonaa.
Ma maqamashay gabadhii cabcadka aheyd ee inta la guursaday gaalkacyo la geeyay ayadoo walac ah arag moos baabuur saaran oo afgooye laga keenay. Ee dhahday. Armosoow inta xaa ku keenay adna malagu soo qafaalay. Kkkkk
Cadcad hiraab xamar waa ku heshiis ee yaan dhexdooda colaad la dhigin.
Dambiyo xun ayaa ka dhacay Somaliya.
Muqdisho iyo Kismaayo waxaa ku habsaday dad aan ehel u ahayn Magaalo iyo dhaqankeeda.
Dee kuwii Kismaayo ku habsaday dhul ayay shideen markii ay garan waayeen sida loogu noolaado magaalada kk
Beeerihii iyo shaqo kale garan maayaan.
Kuwii Muqdisho ku habsadayna hantidii ay dhaceen ayay ilaainayaan oo dawlad oo dhan way ka baqayaan.
Sidan ayay ugu badisaa.
Waar labadaa meelood waa in shaqo laga qabtaa.
Dee maanta waad yare turunturootey.
Daarood iskuma dirin cadcad iyo hiraab.
Wixii muqdisho ka dhacey nin waliba waa ogyahay,dadak looma-ooyaanka ahna ilaa had a xaquuqdooda ma helin.
Yaa dacwoonaya,ma nin haduu juuq yidhaahdo
Sujuuda laga tooganayo baa hadli Kara.
Ninyahown aniga xamar iiga sheekayn maysid
Waxan kuugu dhaaranyaa iney jiraaan gabdho cadcad ah oo aan meherba lagu heysan,
We iska dhali jirey afduub?
Xisaabi aakhirey taalaa,sababaha at u degi weyday soomaaliya ayey arintani koow ka yahay.
Daarood laftigiisu asxaan cidna uma sameyn.
Laakiin idinku beytariga iyo miisaanka dadka LA saaro baad na dheer tihiin.
Garqaad runtu wey qadhaadhahay, kkkkkkkkk.
Horta waan ku salaamay.Dee qaladkaaa waxaa iska lahaa Daarood.Ileen Daarood isaga ayaa wadanka madax ka ahaa.Dadkii shacabka ahaa ee aad dawlada u ahaydeen inaad difaacdaan ayay ahayd.Hubkii waad haysateen ragii somaliyeedna way joogeen kk
saw Daarood hablahaasi muu dayicin?
Waraabahaasi hablihii iska kaxaystay saw muu waayin dawlad ka difaacda.
Walaal salaamulaahi,waan Ku salaamayaa.
Mr.bahal maxaanu difaacnaa anagaaba nala bursanayee.kkkkkkkkkkkk.
Mexeey difacaan sow kan ayagiiba lagu darsaday. Dadkii difaaca ka sugaayay ayeyba kasii hor mareen. Waa kaftan.
Xaqiiqdii qaladaad waa jiraan laakiin maaha sida loo dhoodhoonay.
Waad iga qoslisay walaahi.
Garqaad sheeko soomaali baa aheyd.
Nin fuley ah oo cigaal shiidaad LA dhaho,ahaa isagoo adhi ilaalinaya waraabe/dhurwaa soo weeraray, bahalkii kamuu celin xoolihiiye,isagaaba hor or day adhigii,kkkkkk waxa lagu yidhi war maxaad LA carareysaa oo aad aragtey,markaasuu yidhi kunkaas neef oo madaxa madow waxay ka carareen baan ka cararayaa,ninyahow waanba shakiyee adhiga ma USC baa baacsaneysay.
Farxiya, kkkka, runtii sida uu sheegay Garqaad waaye, oo walaahi anniga ayaa aqaana 10 gabar oo cadcadka ah, oo dhalinyaro Saleebaan ah guursaday, si iskood ah. Waxaan laleeyahay dad ayaa lasoo afduubtay, amaba “cadaabta” la geeyay, waa iska dacaayad. Yes, 1919 waa dhacday mid daanyeer ah, iyo waxyar in eey xadgudub dad gabdho kusameeyeen, laakiin, uma gaar aheeyn xadgudubkaas reer Xamarka kaliya. Waase ok, hadii aad ku kaftameeyso 🙂
Laakiin, annaga iyo reer Xamar si fiican Ayaan xidid u noqonay. Anniga ayeeyba gabar aan saaxiib nahay ii keentay Sadex sawir oo gabdho qurux badan oo reer Xamar, oo eey i dhahday mid kadooro 🙂
Garqaad, thank you, xogta saxda ah oo aad heeyso oo aad hogaamiye Farxiyo lawadaagtay.
Arrinkaan shirka Dhuusamareen, walaahi baan idinku dhaaranayaa in eeysan wax horay loogu socda kasoo bixi doonin.
Warqaddo been been ah, waa laqori karaa, waana wax lajabni doona inta qada lagu qorray eeysan qalalin.
Waxaa intaas sii dheer, kasakow maalaayacniga eey baaq iyo qodobadda kusheegayaan, gowsaha ayaa la’isku heeystaa, wax laga heshiisyay, iyo wax lagu heshiiyayna walaahi in eeysan jirrin. Oh, dakadii Hobyo Ayaan dhiseeynaadii beenta aheeyd, ayeey tanna lamid tahay.
Dadka Somaliyeed majeclo runta. Waana waxa weeyn oo ka qaldan.
In la heshiiyo ma’adko, laakiin, dadku maba yaqaanaan run isku sheegid, daacadnimo, waxa fiican iyo waxa xun, dib u fiirin waxa qaldamay, horay u fiirin waxa la rabbo in lagaaro. Xirfad waaye sida loo xaliyo iska hor’imaadka figradaha. Daanyeero.
Abbahay Dooli dile,qof nool muu u daahaa!!
Qoraalkan marka aan khriyey wax cusub oo aynaan ogeyn kuma qorna. Wuxuu la mid yahay un qoraaladii quruxda badnaa farahana badnaa ee 30 sanee ina dhaafay kasoo bixi jirey goobaha soomaalidu ku shirayso. Hadhowna la sheegi-jirey in heshiis la kala saxiixday.Laakiin xaaladdu ku dhammaan jidhey warqaddaa khalliga ah ee aan wax ka hoosayn.
Muhiimada ugu wayn ee meesha ku qoran waa in ay doonayaan in ay meesha keenaan rag ay iyagu wataan iyo waliba odayaal ogol shakhsiga ay wataan.Taas oo ka dhigan nin dooran doorta
Cadaado salaan sare.
War nimanyahoow. Odayaashii reer cadaado meel adagbeey istageen. Weliba madaxweynaha garbeey ku qabsadeen. Inkastoo arimaha galmudug madaxweynuhu shaqo ku laheyn. Oo kheyre wato hadana reer cadaado weli wey maqan yihiin.
Saaxiboow yeysan idin eedsan baahashaasu. Cadaado iyo dhuusamareeb waa Isku mide.
Adiga wel wel ayaa kaa haayo midnimada reer galmudug. War caadi Iska dhig waxba idinkama halabayaan.
Kheyre galmudug in uu geesto qof uu isagu raali ka yahay waa wax caadi ah. Laakiin waa in uu noqdo nin sheqeynaayo. Maaha in loo keeno kaliya nin wixii la rabo loo dirsado.
Anigu waxaan tageere u ahay. Mr odawaa
Siyaasadda qaboow in aad barato waa muhiim.
madaxdii keenta galmudug oo dhinac u wads jeeda …. waxba kuma aha inay dhisan somalia
Oo dhinaca wanagsan u wada jeeda dadka dowlad
Waa rabaan ee ilaah madaxda ha inoo barakeeyo
30 sano oo qax dil boob barakin ah waa inan ku
Bedelnaa 30 kii sano ee horumarka midnimada wada
Jirka iyo inaan quweeno somalinimada war dalkaan
Intaan la qaysan aan QARANKA u adeegno
Yes arinta Galmudug wel wel wuu nagu hayaa haddanu reer Puntland nahay.Laakiin maaha baqdin aanu ka baqayno in wax u hirgalaan ama ay horumar gaaraan ee waa wel wel ku saabsan in ay meeshu fawdo noqoto. Waana mihiim mooryaan qaawan ee iska yaacaysa cid lagala xisaabtamo in la helo.Annagu maaro uma hayno dad iska yaacaya oo waxay ku dhimanayaan ama ay nagu dilayaan aan garanayn inaanu is mudano
War ileen tanoo kale. Sow adiga u hadlay sidii dowladdi maraykanka.
Isku soo duboo.
Ha welwelin galmudugtii aad dhexdooda ka kaluumeysan jirtay filinkeedii waa dhamaaday.
Dee jaarkaagu inay law and order helaan iyo inay fowdo ku noolaadaan waxaa wanaagsan inay law and order ku noolaadaan oo adiguna aad ka nabad gasho iyaguna kala nabad galaan
Garqaad, eebow waan kusalaamay. Sheekada cajiibka ah ee walaasheen Farxiya ma’aragtay, “kulahaa gabdho ayaa la dhacay”? oo taas wax u gaar ah reer Xamarka miyaa? Somali ilaa iyo waligeed ayeey naago iyo geela kala dhacayeen, ileeyn waa dad daanyeero ahee, markii dagaalka ahliga dhacayna, waxoogaa uunbaa waxii xumaa ee waligeed lasameeyn jirreey lagu sii saa’idiyay.
Anniga wa hubbo, ee halkaan Ayaan ka arkay Barwaani queen, oo dhahaya “madaxweeyne Farmaajo ayaaba naag kufsaday, Carees Ciise iyo waxubuu sheegi jirray gabadhiisa. I dunno, laakiin, taas hakawajaabto Farxiyo Xamxamel, inta eey annaga kaliya madfaca nagu rideeysa kkkkk.
Tan arrinkaan mowduuca, Garqaadow, maya, walaahi brother, hana eersato, intii wax xun, oo aad iyo aad u xun, oo been ah, oo baadil ah, oo aan shaqeeyn doonin, oo la’isku dilli doona, la’isku nici doona intii aan ka’aamusi laheeyn, maya waxaan marrabno in aan qeeyb ka noqono.
Walaa madaxweeyne Farmaajo, walaa daanyeer Kheeyre, ee mooska Wardhiigley ka xadi jirray (land of punt ayaa dhahay), kama yeeleeyno iyaga iyo qof kale wax loo jeeda in eey daanyeernimo lagu dhisayo.
Horray hadii aanan loo fullin waxii lagu heshiiyay, ma’ii sheegi kartaa sababta heshiis been ah oo cusub oo warqadda uu ku qorran yahay inta eeysan qalalin lajabinayo, sababta qeeyb looga noqda?
Yaab, waaba waali cas meey dhihi jirreen dadka qaarkood.
Bal aqyaareey, yaa iga dhaadhicin karro, hadii waxii horre loogu heshiiyay (kabadan hal mar, iyo kabadan dhinacyo kala duwan eey ku heshiiyeen) hadii aanan la’is weeydiin sababta loo fulin waayay, miyeey sax tahay in heshiis kale oo daanyeernimo ah oo meeshaas oo kale marra la galo?
Come on guys, daanyeerniamda aan sheegaya waa taas.
Garqaadow, qaad gartaas, adiga iyo inta kale ee wax kayaqaan cadaalada Ayaan gartaas weeydiinayaa? Waliba si qaas ah, waxaan u weeydiin aqoonyahan Mr. BaHaL,
garmatahay in qof/dad lala galo heshiis, iyada oo “record” kooda hadii lafiiriyo eey ka buuxaan in kulli xeerkii iyo heshiisyadii hore lajabiyay amaba la fullin?
Afar daanyeer oo reer Cadaado sheegto waa joogi karraan meeshaan 6da sanno isbaarada loogu dhigtay maamulka Galmudug, ee Dhuusamareen, laakiin, waleey katahay in eeysan cidna matalin, waa Afar qof oo gaajeeysan, oo iimaan laheeyn. Reerkuse warkooda waa cadyahay.
Kulli reeraha kale ee Somaliyeed ee dagan, amaba kusafra, amaba ku ganacsadda Galmudug, amaba dariska la’ah, Ayaan uga digeeynaaa in caqli daanyeernimo ku dhaqmaan, ka fiirsada. Hadii aadnana caqli laheeyn, waan idiin digeeynaa. Fiiriya waxii horre, iyo balamahii horre.
Waar meesha kaftan baa ka dhacay iyo qisadii gabdhihii Xamariga iyo Somalida kale.
Farxiyo, Garqaad, Cadaado iyo ragga kale wallaahi waan qoslay sidaad u dhigteen.
Qaran adhaxda ka qabay oo aynu werinayno waayihiisa iyo wixii dhacay marna ku kaftamayno weeeye.
Bal noo wada sheekooyinka xusidda mudan waayo shalay maynaan dhalanne.
Garqaad iyo Cadaado
Waar niman yahow aniga ku wareeraye maamulkan galmudug. Dhulku tagay oo maray waa hore. Waxaad iga jaahil bixisaan maxay Habargidir iyo beelaha la deggan isku haysataan? Maxay beeshan Habargidir isku haysaa?
Yaa hortaagan Maamulkan?
Waar waxani ku wareernaye bal noo qeexa idinkoo caddaaladda ka tagayn oo sida wax u jiraan noo ifinaya.
Horaan u idhi nin war hayaa ha kuu warramo
Shirkii Hobyo natiijadii kasoo baxday iyo natiijadan ma wada socdaan? Mise wuxuu ahaa khiddad cusub iyo jillaafo loo degay qolada N&N. Si loo weel badsado.Kolley anigu waxaan u malaynayaa inay Galmudugtii hore oo ahlu sunna ka maqantahay soo wadaan ama ugu yaraan qoondada ahlu sunno hesho mid la mida ay iyana rabaan.Bariiskii Hobyo lagu cunay bilaash maahayn ee bood boodkiisii ayaa la iska rabaa sidaan filayo kkkkkkkkkkkkkkk
Waan ku salaamay sxb.
Waa runtaa oo %100 waan kugu raacsanahay in Somalidu tahay daayeero,hadiiba aanay ka liidanin.Daayeerka ayaaba ku heshiiya inay Daayeerada kale iska celiyaan.
Dad aan fulinayn wixii ay ku heshiiyeen oo hadana wada jooga.Dad aan fulinayn wixii ay ku heshiiyeen oo hadana wax kale ku heshiinaya kk
Ma qiyaasi karo nooca dad ee ay yihiin runtii.
Dad fulin waayay wixii ay ku heshiiyeen oo kala tagay,waaba mid la fahmikaro,laakiin dad aan fulinin wixii ay ku heshiiiyeen,oo hadana wax kale ka shiraya.
Saw maaha in horta lays waydiiyo wixii lagu heshiiyey,iyo meesha uu ku dambeeyay.
Wixii shalay dhacayba lama garanayo
Maxaa dhacay oo wixii hore u fuliwaayeen/
Su’aaliba meesha ma taalee,waa uun layska socdaa.
Waxaan odhankaraa,meel loo socdaa ma jirto.
Dadka Somalidu wax ay heshiis ku yihiin ayaan garan waayay.
Hadaan soo koobo hadalkayga;dhibka ugu wayn ee inna haystaa waa wixii lagu heshiiyay oo aan la fulinayn.Dee waataasi xaarka la cunayo ee qoriga la sito.
Dadkii waa kuwan.
Maxaan u gaajoonaynaa?
ASC dhamaantiin markale.
Suldaan Zubeer, kor ayaan ku sheegay waxa eey ku heshiin la’yahiin dadkaan Habargidirta isla sheegta. Mushkilada kataagan Galmudug maahan mid u dhaxeeysa Habargidir iyo qabiilada kale, waa mid u dhaxeeysa dadka Habargidir isla sheegta. Waxaana mushkiladaas in eey xaliyaan iska daayaa, sii cusleeyay madaxweeyne Farmaajo iyo ra’iisalwasaare Kheeyre. Tusaale;
Heshiiska ka dhaxeeyay Galmudugu iyo suufiyada ayaa waxuu ahaa, in Cadaado si kumeelgaar ah u noqoda caasimada Galmudug, kadib marka la xaliya arrinka suufiyada, loo soo wareejiyo caasimada Galmudug Dhuusamareen, laakiin, baarlamaanka Galmudug uu wali fadhigiisa ahaado Cadaado, caasimadana Dhuusamareen. Yacni golaha fulinta eey joogaan Dhuusamareen, sharci dajintana eey ku shaqeeyaan Cadaado [walow aan anniga u arka waxaan dhan ee golayaasha lagu sheegaya in aananba loo baahneeyn, meehsa dhan waxaa ka shaqeeyn karra 5 qof period).
Anyways, arrimahas iyo kuwa kaloo badan ayaa laga baxay, lamana is weeydiin sababta looga baxay, marka ma la’iska socdaa?
Mr. BaHaL, aad baad u mahadsantahay garta sida aad u gooysay u aragtay. Waan kugu raacsanahay in eey wax weeyn umadd ka qaldantahay hadiiba aanan la’is weeydiineeynin waxa looga baxay cahdigii iyo balantii hore.
I like, sida aad u dhigtay, ee ah “waa lagaran karaa dad waxii lagu heshiyay fulin waayay oo kala tagay, laakiin, dad waxii lagu heshiiyay ee hore fulin waayay, oo hadanna wax kale ka shiray”. Allah yacizak, sidda aad u abaartay xigmadaas maskaxdaada katimid.
Ali Zubeer, aan kugu soo noqdee, arrinta kale ee baadilka ah ee dadka Habargidir isla sheegta ku heshiin la’yahiin ayaa waxeey tahay, maadaama maamulka Galmudug, iyo maamulada kale ee Somaliya oo dhan, iyo xataa dowladda dhexe lagu dhisay 4.5 iyo qabiil wax ku qeeybsi, Ahlusunna ma qabiilbaa? Sidee baa Ceeyrna wax lagu siinayaa, hadana Ahlusunna eey qeeyb kale ugu qaadanayaan? Yaab, sow meehsaas qofka arki la’a in eey wax ka qaldanyahiin, oo eey ugu horeeyaan madaxda dowladda dhexe, baadil kuma socdaan, iyo dhibaato horleh oo eey jideeynayaan. Dhagtana soo dhaweey, aan wax kuu sheegee, firqooyin dagaaal ku dhisana meesha waa kujirraa oo dadkaan madhabta eey kala heeystaan amaba u kala badanyahiin ayaa ka xoogbadan beentaan iyo isku dhoobdhoobka waxa lagu sheego Habargidir.
Daanyeerta Habargidir waxeey heshiis kuyahiin in aanan la heshiin, ilaa caqli daanyeernimada Ceeyrka wadaan oo dadka qaarkood indhaha ka qarsanayaan aanan la sheegin, oo aanan la sixin.
warku waa cad yahay mar haddii beel habargidir ka tirsan doonayso inay marna ku cunaan magaca alhu subagle marna magaca qabiilka. Taasi waa waalli cas.
Cayr waa in nijaasnimadaasi laga aqbalin.
Madaxwaynaha iyo RW sidee bay ku aqbaleen khaladka intaa la eg.
Midda kale waan kugu raacsanahay sidee baarlamaan ku sheegga (magaca saxa ah waxaa weeye golaha deegaanka) iyo madaxda gobolka u kala degi karaan laba magaalo.
Habargidir iyaga haddii ay isbaaro isu dhiganayaan qarankanna qaskii ogayd ku sameeyeen waa in la maamulaa haddii ayan is maamuli karin
WCS, walaalkiis Ali Zubeer,
Waa sidaas waxa socda inta aan ogahay. Waxyaabo kalena waa iska jirri karaan, laakiin, kuwaan ayaa ugu muhiimsan.
See, leadership ama hogaamiyaha rasmiga ah waxaa laga rabaa marka uu Caabudwaaq, amaba Cadaado, amaba Dhuusamareen, amaba Gaalgacyo tago, in qolo walba, iyo qof walba waxa eey u soo bandhigaan, uusan “haye” dhihin, bal uu u sheego qolo hebelna sidaas ayeey rabaan, umaddana sidaas meel dhexe, oo isku tanaasul cadaalad ku dhisan ku hogaamiyaan. Laakiin, madaxda dowlada dhexe hadeer, iyo kuwii horeba sifahaas malaheeyn.
Totally, brother, waan kugu raacsanahay in Habargidir la maamulo, oo qabiilaa kale, iyo xataa meelo kale laga dhigo caasimada, maadaama aan ogahay waxa caqligooda dad aan ogahay uu yahay, sidaas anniga iyo dad badan oo isku reer sheegano waa taageerayaan, laakiin, umadii dhibka badneeyd sidee looga dhaadhicin, amaba u yeelayaan arrinkaas?